Fiandraiketana ara-bola - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Fitantanam-bola ara-bola
Ny fitantanam-bola kristiana dia midika hoe mitantana ny fananan’ny tena manokana amin’ny fomba maneho ny fitiavana sy ny fahalalahan-tanan’Andriamanitra. Tafiditra ao anatin’izany ny fanoloran-tena hanome ampahany amin’ny loharanon-karena manokana ho an’ny asan’ny Fiangonana. Ny iraka nomen’Andriamanitra ny fiangonana hitory ny filazantsara sy hamahana ny ondry dia avy amin’ny fanomezana. Ny fanomezana sy ny fanomezana dia maneho ny fanajana, ny finoana, ny fankatoavana ary ny fitiavan’ny mino an’Andriamanitra, izay loharanon’ny famonjena sy mpanome ny zava-tsoa rehetra. (1. Petrus 4,10; 1. Korintiana 9,1- enina ambin'ny folo; 2. Korintiana 9,6-11)
Ao amin’ny taratasiny faharoa nosoratan’i Paoly ho an’ny Korintiana, dia nanome fanoharana faran’izay tsara izy ny amin’ny fomba mahakasika ny fiainan’ny mpino amin’ny fomba azo ampiharina ilay fanomezam-pahasoavana mahatalanjona. "Fa ampahafantarinay anareo, ry rahalahy malala, ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ny fiangonana any Makedonia."2. Korintiana 8,1).
Tsy nanao tatitra madinidinika fotsiny i Paoly - naniry ny handray anjara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba mitovy amin'ny fiangonana tao Tesalonika ireo rahalahy sy anabavy tany Korinto. Naniry hanome valiny marina sy mamokatra izy ireo amin'ny fahalalahan'Andriamanitra.
Nanamarika i Paul fa "nahasosotra be" ny Makedoniana ary "nahantra indrindra" - nefa koa "fifaliana lehibe" (and. 2). Ny fifalian'izy ireo dia tsy avy amin'ny filazantsaran'ny fahasalamana sy fanambinana. Ny fifalian'izy ireo dia tsy avy amin'ny fananana vola sy entana be dia be, na dia eo aza ny fananana kely dia kely!
Ny fihetsiny dia mampiseho zavatra "avy amin'ny tontolo hafa", zavatra mihoatra ny natoraly, zavatra iray hafa ankoatran'ny tontolo voajanaharin'ny maha-olona tia tena, zavatra iray izay tsy hazavain'ny soatoavin'ity tontolo ity: "Fa faly ny hafaliany rehefa voaporofo fahoriana ary na dia tena mahantra aza izy ireo dia nanome tamin'ny fomba tsotra rehetra »(and. 2).
Mahagaga izany! Atambaro ny fahantrana sy ny fifaliana ary inona no azonao? Fanomezana be dia be! Tsy io ny isan-jaton'izy ireo manome. "Fa arak'izay tratry ny heriny no ijoroako ho vavolombelona ary nanome an-tsitrapo mihoatra ny heriny aza izy ireo" (and. 3). Nanome mihoatra ny "antonony" izy ireo. Nanolotra sorona izy ireo.
Eny, toy ny hoe tsy ampy izany, "ary nangataka tamim-pandresen-dahatra be izahay mba hahafahan'izy ireo manampy amin'ny asa soa sy fiombonam-bavaka ho an'ny olona masina" (and 4). Tao anatin'ny fahantrany dia nangataka fotoana tamin'i Paul izy ireo hanome zavatra bebe kokoa noho izay mety!
Izany no fomba niasan'ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny mpino tany Makedonia. Fijoroana ho vavolombelona momba ny finoan'izy ireo an'i Jesosy Kristy izany. Fijoroana ho vavolombelon'ny fitiavan'izy ireo ara-panahy ho an'ny olona hafa izany - fijoroana ho vavolombelona izay tian'i Paoly hahafantatra sy manahaka ny Korintianina. Ary mbola ho antsika ihany koa ankehitriny raha ahafahantsika mamela ny Fanahy Masina hiasa malalaka ao anatintsika.
Voalohany amin'ny Tompo
Fa maninona ny Masedoniana no nanao zavatra "ivelan'ity tontolo ity"? Hoy i Paoly: "... fa izy ireo kosa nanolotra ny tenany, ho an'ny Tompo aloha, avy eo ho antsika, araka ny sitrapon'Andriamanitra" (and. 5). Nanao izany tamin'ny fanompoana an'ny Tompo izy ireo. Ny sorona nataon'izy ireo dia ho an'ny Tompo aloha. Asa fahasoavana avy amin'ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany izany ary hitan'izy ireo fa faly nanao izany izy ireo. Amin'ny famaliana, fahalalana, inoana ary fiasan'ny Fanahy Masina ao anatiny, satria ny fiainana tsy refesin'ny haben'ny zavatra ara-nofo.
Raha mamaky ato amin'ity toko ity isika, dia hitantsika fa tian'i Paoly hanao toy izany koa ny Korintiana: "Ary izahay dia nino an'i Titosy fa, tahaka ny nanombohany talohan'izay, dia tokony hanao izany soa izany eo aminareo koa izy. Fa tahaka ny manan-karena amin'ny zavatra rehetra ianao, amin'ny finoana sy ny teny sy ny fahalalana ary ny fahazotoana sy ny fitiavana izay nifohazanay taminao, dia mba omeo toy izany koa amin'izany asa soa izany "(and.6-7).
Nireharehan'ny Korintianina ny harem-panahiny ara-panahy. Be dia be ny zavatra nomeny, nefa tsy nomen'izy ireo izany! Tian'i Paoly ho lehibe kokoa ny fahalalahan-tanana satria izany no fanehoana fitiavana an'Andriamanitra, ary ny fitiavana no zava-dehibe indrindra.
Kanefa fantatr’i Paoly fa na manao ahoana na manao ahoana ny omen’ny olona iray, dia tsy misy ilàna azy izany raha toa ka sosotra ny toe-tsaina fa tsy malala-tanana (1. Korintiana 13,3). Noho izany, dia tsy te hampatahotra ny Korintianina hanome amin-kitsim-po izy, fa te hampihatra fanerena kely satria tsy araka ny nampoizina ny fitondran-tenan’ny Korintiana, ka tsy maintsy nolazaina tamin’izy ireo fa izany no nitranga. “Tsy baiko no ilazako izany; fa satria mazoto loatra ny hafa, dia diniko koa ny fitiavanareo sao mba mety tsara
angamba" (2. Korintiana 8,8).
Ry Jesosy, mpampiantrano anay
Ny klerjy tena izy dia tsy hita amin'ireo zavatra nireharehan'ny Korintiana - refesina amin'ny fenitra lavorary an'i Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy ho an'ny rehetra. Ary noho izany dia nasehon'i Paoly ny fiheveran'i Jesosy Kristy ho porofo ara-teolojika amin'ny fahalalahan-tanana izay tiany ho hita ao amin'ny fiangonana tany Korinto: «Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika: na dia manankarena aza izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo. mba hialanao amin'ny fahantrany dia hanan-karena '»(and. 9).
Tsy harena ara-batana ny harena noresahin'i Paoly. Lehibe lavitra noho ny harena harena ara-batana ny harenantsika. Any an-danitra ianao, voatokana ho anay. Nefa na dia izao aza, raha avelantsika hiasa ao anatintsika ny Fanahy Masina, dia afaka mahazo fahatsapana an'izany harena maharitra izany isika.
Amin'izao fotoana izao, ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky dia mandalo fitsapana, na dia fahantrana aza - ary, noho i Jesosy mitoetra ao amintsika, dia afaka ny ho feno fahalalahan-tanana isika. Mahazo misimisy kokoa amin'ny fanomezana isika. Afaka manao izany isika
mihoatra ny kely indrindra satria na ny ankehitriny ny fifaliantsika an'i Kristy dia mety hihoatra ny fanampiana ny hafa.
Betsaka no azo lazaina momba ny ohatr'i Jesosy, izay niresaka matetika momba ny fampiasana ny harena marina. Ao amin'io fizarana io dia mamintina azy ho "fahantrana" i Paoly. Vonona hanao izay hampahantra ny tenantsika i Jesosy. Raha manaraka azy isika dia nantsoina hamoy ny zavatra eto amin'ity tontolo ity, mba hiaina mifanaraka amin'ny soatoavina hafa ary hanompo azy amin'ny alàlan'ny fanompoana ny hafa.
Fifaliana sy fahalalahan-tanana
Nanohy ny antso nataony tany amin'ny Korintiana i Paul: “Ary amin'izany dia milaza ny hevitro aho; satria izany dia mahasoa anao izay nanomboka tamin'ny taon-dasa tsy tamin'ny fanaovana ihany, fa amin'ny faniriana ihany koa. Fa izao koa ataovy ny fanaovana, araka izay irinao, dia mirona hanao araka ny refin'ny anananao ianao "(and 10-11).
"Fa rehefa misy ny finiavana tsara" - raha misy ny toe-tsaina malala-tanana - "dia raisina araka izay ananan'ny olona izy fa tsy araka izay tsy ananany" (and. 12). Tsy nangataka i Paoly mba hanome ny Korintiana betsaka toy ny an'ny Masedoniana. Efa nomen'ny Makedoniana ny fananany; Nangataka tamin'ny Korintiana fotsiny i Paul mba hanome araka izay tratry ny ananany - fa ny tena zava-dehibe dia ny faniriana an-tsitrapo hanome an-tsitrapo.
Nanohy ny fananarana vitsivitsy i Paoly ao amin'ny toko faha-9: «Fa fantatro ny sitrakao, izay deraiko miaraka amin'ireo avy any Makedonia, raha hoy aho: Efa vonona tamin'ny taona lasa Akaia! Ary ny ohatra nasehonao dia nahatonga ny ankamaroan'izy ireo »(and. 2).
Tahaka ny nampiasan'i Paoly ny ohatra Makedoniana mba hampiasana ny Korintianina ho amin'ny fahalalahan-tanana, dia efa nampiasa ny Korintiana izy taloha handoka ny Makedoniana, toa tamin'ny fahombiazana lehibe. Malala-tanana ny Makedoniana ka nahafantatra i Paoly fa afaka nanao zavatra betsaka lavitra noho ny teo aloha ny Korintianina. Nefa dia nirehareha tany Makedonia izy fa malala-tanana ny Korintianina. Ankehitriny izy dia naniry ny Korintiana hamita azy. Te hananatra hevitra indray izy. Te hanery ny sasany izy, saingy tiany omena an-tsitrapo ny lasibatra.
«Fa nirahiko ny rahalahy mba tsy ho simba ny reharehanay ny aminareo amin'ity lalao ity, ary mba ho vonona ianareo, araka ny nolazaiko ny aminareo, fa raha avy hiaraka amiko ny avy any Makedonia ka mahita fa tsy vonona ianareo, dia izahay mba tsy hitenenana hoe: ho menatra ianao amin'ity fahatokisantsika ity. Ka izao dia noheveriko fa ilaina ny mamporisika ny rahalahy mba hanatona anao mba hanomanana ny fanomezana fitahiana izay efa nambaranao mialoha mba ho fanomezana fitahiana fa tsy avarice »(and. 3- 5 ).
Avy eo manaraka andininy iray efa henontsika imbetsaka. “Ny olon-drehetra, araka ny noeritreretiny tao am-pony, tsy amin'ny fisalasalana na noho ny faneriterena; fa ny mpanome sitraka dia tian'Andriamanitra ”(and 7). Ity fahasambarana ity dia tsy midika hoe hafaliana na fihomehezana - midika fa mahafinaritra antsika ny mizara ny entantsika amin'ny hafa satria ao amintsika i Kristy. Ny fanomezana dia mahatonga antsika hahatsapa ho tsara.
Ny fitiavana sy ny fahasoavana dia miasa ao am-pontsika amin'ny fomba iray ka ny fiainana manome tsikelikely dia lasa fifaliana lehibe kokoa ho antsika.
Ny fitahiana lehibe kokoa
Ao amin'ity fizarana ity dia niresaka momba ny valisoa koa i Paul. Raha manome malalaka sy malala-tanana isika, dia hanome antsika koa Andriamanitra. I Paoly dia tsy misalasala mampatsiahy ny Korintiana izao manaraka izao: "Fa Andriamanitra mampahatanjaka ny fahasoavana rehetra eo aminareo, mba hanananareo fahafaham-po tanteraka amin'ny zavatra rehetra ary mbola hanan-karena amin'ny asa tsara rehetra" (and 8) .
Nampanantena i Paoly fa malala-tanana Andriamanitra. Indraindray Andriamanitra manome antsika zavatra ara-nofo, nefa tsy izany no resahin'i Paoly eto. Miresaka fahasoavana izy fa tsy ny fahasoavan'ny famelan-keloka (mandray izany fahasoavana mahatalanjona izany amin'ny finoana an'i Kristy isika fa tsy asan'ny fahalalahan-tanana) - miresaka karazana fahasoavana maro hafa izay azon'Andriamanitra omena i Paoly.
Raha manome fahasoavana fanampiny ho an'ireo fiangonana any Makedonia Andriamanitra, dia ho kely kokoa ny vola noho ny teo aloha, fa vao mainka mifaly! Izay olona manan-tsaina, raha voatery misafidy izy ireo, dia aleony ny fahantrana amam-pifaliana toy izay harena tsy misy fifaliana. Ny fifaliana no fitahiana lehibe kokoa, ary omen'Andriamanitra fitahiana lehibe kokoa isika. Ny kristiana sasany dia samy mahazo - nefa manana andraikitra koa izy ireo hampiasa ny hafa mba hanompoana ny hafa.
Avy eo dia naka teny avy tao amin'ny Testamenta Taloha i Paul avy eo: "Namafy izy ka nanome ho an'ny mahantra" (and. 9). Inona no karazana fanomezana lazainy? «Ny fahamarinany maharitra mandrakizay». Ny fanomezana ny fahamarinana dia lehibe noho izy rehetra. Ny fanomezana ny fahamarinana eo imason'Andriamanitra - izany no fanomezana maharitra mandrakizay.
Mamaly fo feno fahalalahan-tena Andriamanitra
"Izay manome voa sy mofo hohanin'ny mpamafy dia hanome voa ho anao ary hahamaro azy ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanao" (and. 10). Ity andianteny farany momba ny fijinjana fahamarinana ity dia mampiseho amintsika fa nampiasa sary i Paoly. Tsy mampanantena voa ara-bakiteny izy, fa milaza kosa fa manome valisoa ny olona malala-tanana Andriamanitra. Omeny izy ireo afaka manome bebe kokoa.
Hanome bebe kokoa ny olona mampiasa ny fanomezan'Andriamanitra hanompo izy. Indraindray miverina amin'ny fomba mitovy, varimbazaha, varimbazaha, vola ho an'ny vola, fa tsy matetika. Indraindray izy dia mitahy antsika amin'ny hafaliana tsy miovaova ho valin'ny fanomezana sorona. Manome ny tsara indrindra foana izy.
Nilaza i Paoly fa hanana izay rehetra ilainy ny Korintiana. Fa inona? Ka dia «manankarena amin'ny asa tsara rehetra». Nilaza toy izany koa izy ao amin'ny andininy 12: "Satria ny fanompoana amin'ny famoriam-bokatra ity dia tsy vitan'ny fanasitranana ny tsy fahampian'ny olona masina, ary miasa betsaka koa izy amin'ny hoe maro no misaotra an'Andriamanitra." Ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tonga amin'ny fepetra, hoy isika. Mila mampiasa azy ireo izahay, aza afeninao amin'ny efi-trano lemona.
Izay manan-karena dia tokony hanan-karena amin’ny asa tsara. “Anaro ny mpanankarena amin’izao tontolo izao mba tsy hirehareha, na hanantena harena foana, fa amin’Andriamanitra, Izay manolotra antsika amin’ny haben’ny zavatra rehetra mba hifaliantsika; mba hanao soa, hanan-karena amin’ny asa tsara, ho tia manome, hahasoa”1. Timoty 6,17- iray).
Inona no valisoa amin'ny fihetsika tsy mahazatra toy izany, ho an'ireo olona tsy mifamatotra amin'ny harena toy ny zavatra tokony hotazonina, nefa manome an-tsitrapo izany? "Amin'izany fomba izany no anangonany harena ho antony tsara amin'ny ho avy, mba hahazoany ny tena fiainana" (and. 19). Rehefa matoky an Andriamanitra isika dia misambotra ny fiainana izay tena fiainana.
Ry namana, tsy mora ny fiainana. Ny fanekena vaovao dia tsy mampanantena fiainana milamina. Manolotra mihoatra ny iray tapitrisa mahery izy io. Tombontsoa ho an'ny fampiasambola ataontsika - saingy mety misy traboina manan-danja tokoa amin'ity fiainana tsy maharitra ity.
Ary misy valiny lehibe koa eto amin'ity fiainana ity. Manome fahasoavana be dia be Andriamanitra amin'ny làlana (sy ny fahendreny tsy manam-petra) izay fantany fa tsara indrindra ho antsika izany. Afaka matoky azy amin'ny fiainantsika isika amin'ny fisedrana sy fitahiana azontsika. Afaka matoky azy amin'ny zavatra rehetra isika, ary rehefa manao ny fiainantsika isika dia tonga fijoroana ho vavolom-pinoana.
Tena tia antsika loatra Andriamanitra ka nandefa ny Zanany ho faty ho antsika na dia mpanota sy fahavalontsika aza isika. Koa satria nasehon'Andriamanitra fitiavana toy izany isika, dia afaka mahazo antoka isika fa hikarakara antsika izy, ho an'ny fahasalamantsika maharitra, ankehitriny isika dia zanany sy sakaizany. Tsy mila manahy momba ny hahazoantsika ny volantsika isika.
Andao hiverina amin'ny 2. Korintiana 9 ary mariho ny zavatra nampianarin’i Paoly ny Korintiana momba ny fahalalahan’izy ireo ara-bola sy ara-nofo. « Ary amin'izany dia hanan-karena amin'ny zavatra rehetra ianareo, mba hanome amin'ny fahatsorana rehetra, izay miasa aminay.Misaotra an'Andriamanitra. Fa ny fanompoam-pivavahana amin’izao fivoriana izao dia tsy vitan’ny hoe manafoana ny tsy fahampian’ny olona masina, fa miasa fatratra koa, satria maro no misaotra an’Andriamanitra » (and. 11-12).
Nampahatsiahivin'i Paoly ny Korintiana fa ny fahalalahan-tanana dia tsy asa ezaka maha-olombelona fotsiny fa manana vokatra teolojika. Misaotra an’Andriamanitra noho izany ny olona satria takatr’izy ireo fa miasa amin’ny olona ny Andriamanitra. Napetrak'Andriamanitra ao am-pony izay manome ny fony. Toy izao ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra.
"Fa noho io fanompoana mahatoky io dia hidera an'Andriamanitra izy ireo noho ny fankatoavanao ny fanekena ny filazantsaran'i Kristy sy ny fahatsoranao ny fiombonanao aminy sy izy rehetra" (and 13). Misy teboka marobe manamarika an'io. Voalohany, ny Korintiana dia afaka nanaporofo ny tenany tamin'ny asany. Nasehon'izy ireo tamin'ny zavatra nataony fa tena misy ny zavatra inoan'izy ireo. Faharoa, ny fahalalalahan-tanana dia miteraka tsy fisaorana fotsiny, fa koa fisaorana [fiderana] an 'Andriamanitra. Fomba fiankohofana io. Fahatelo, ny fanekena ny filazantsaran'ny fahasoavana dia mitaky fankatoavana ihany koa, ary ny fankatoavana dia mitaky fizarana loharano ara-batana.
Manome ny filazantsara
Nanoratra momba ny fanomezana amim-pahalalahan-tanana mifandraika amin'ny ezaka atao hanamaivana ny mosary i Paoly. Saingy ny fitsipika mitovy amin'izany ihany dia mihatra amin'ny famoriam-bola ara-bola ananantsika ao amin'ny Fiangonana ankehitriny mba hanohanana ny filazantsara sy ny ministeran'ny Fiangonana. Manohy manohana asa lehibe izahay. Izany dia mamela ireo mpiasa izay mitory ny filazantsara hiaina fiainana avy amin'ny filazantsara araka izay tratranay.
Mbola hamindra fo foana Andriamanitra. Mbola asiany harena any an-danitra sy fifaliana mandrakizay. Ny filazantsara dia mbola nitaky fitakiana amin'ny lafiny ara-bola. Ny toe-tsaintsika momba ny vola dia mbola maneho ny finoantsika ny ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sy mandrakizay. Mbola hisaotra sy hidera an’Andriamanitra ny olona noho ny sorona ataontsika anio.
Mahazo fitahiana isika amin'ny vola izay omentsika ny fiangonana - manampy ny fandoavana ny hofan-trano ho an'ny efitrano fivoriana, ho an'ny fikarakarana pastora ary ny boky. Saingy ny fanomezana ataontsika dia manampy ny hafa hanome boky ho an'ny hafa, hanome toerana hahafahan'ny olona mahafantatra vondron'olona mpino tia ny mpanota; handoa vola andiana mpino izay mamorona sy mihazona toetrandro izay ahafahan'ireo mpitsidika vaovao ampianarina momba ny famonjena.
Tsy mbola fantatrao (nefa) ireo olona ireo, fa ho feno fankasitrahana anao izy ireo - na farafaharatsiny misaotra an'Andriamanitra noho ny sorona nataonao. Asa lehibe tokoa io. Ny zavatra manan-danja indrindra azontsika atao amin'ity fiainana ity aorian'ny fanekena an'i Kristy ho Mpamonjy antsika dia ny manampy amin'ny fampitomboana ny fanjakan'Andriamanitra, hanisy fiovana amin'ny famelana an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika.
Te-hamarana ny tenin'i Paoly ao amin'ny andininy 14-15 aho: «Ary amin'ny fivavahan'izy ireo aminao dia maniry anao izy ireo noho ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe indrindra aminao. Fa misaotra an'Andriamanitra noho ny fanomezana tsy hay lazaina! »